Mpempe eriri plastik n'ogbe X8411 Onye nrụpụta na onye na-ebubata | Xushi
Ihe eji eme ihe: ABS
Akụrụngwa ahụ: Plastic
Ụdị nwụnye: Ekwadoro oche
Ihe onwunwe Valve isi: ABS
Aha: Plastic ABS jiri nwayọọ na-emeghe faucet
nha: 1/2 ''-3/4''
Ụdị: meghere nso
ihe: ABS ma ọ bụ PP
Nnwale:100% Nnwale ntapu
Ọkara: Mmiri Okpomọkụ nkịtị
Jiri maka: ọkpọkọ plastik
Ngwa: Ịgba ubi ubi, ugbo, ubi, ụlọ ọrụ, wdg.
ABS ma ọ bụ PP
Ìhè Environmental Inogide
mmiri mmiri na-emebi emebi
Agriculture irrigation Garden Construction Petroleum chemical Industry ETC.
Uru nke ọkpọkọ rọba nke Xushi Plastic Industry mepụtara:
Igwe mmiri rọba nwere ezigbo kemịkalụ na ihe mkpuchi nke rọba. Igwe mmiri rọba nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ na ọ dịghị mfe ịcha. Karịsịa faucets rọba dị na ahịa na-abụkarị nke ABS rọba. ABS plastic bụ ihe ọhụrụ nke na-adịghị egbu egbu na nke na-enweghị ụtọ, nwere ihe ndị dị mma nke kemịkal na ihe mkpuchi ọkụ eletrik. Ọ na-etinye uche dị iche iche Njirimara nke ps, san, na bs ihe. , Ọ nwere magburu onwe n'ibu Njirimara dị ka ike, ike na rigidity.
Igwe mmiri rọba nwere mmetụta nkwụsi ike dị mma nke ukwuu, nkwụsi ike akụkụ mpụga dị mma, enweghị nrụrụ, ịdị arọ dị arọ, enweghị unyi, enweghị nchara, enweghị ụtọ, ọnụ ala na ihe owuwu dị mfe. Ọ bụ ngwaahịa mmiri mmiri na-adị mma na gburugburu ebe obibi.
3. ezigbo nguzogide corrosion
Igwe mmiri rọba nwere ngbanwe nke rọba n'otu oge ahụ, mgbanwe dị mma nke ukwuu, na ọkpọkọ rọba nwere obere mmịnye mmiri, ezigbo nguzogide corrosion na ntinye dị mfe.
4. Ụdị dị iche iche
Ọdịdị emelitere nke ọkpọkọ rọba bụ tumadi valvụ ahụ na ngbanwe nke ejiri otu agba mee. Opekempe otu n'ime valvụ ma ọ bụ mgba ọkụ nwere ihe mgbochi ihe eji achọ mma. Agba nke mgbanaka a na-achọ mma na ngọngọ ihe eji achọ mma dị iche na nke valvụ ahụ na mgba ọkụ. Nhazi ihe eji achọ mma na-eme ka ọkpọkọ rọba ọhụrụ ahụ bụrụ ihe bara uru ma mara mma, na-eme ka ụdị mmiri ahụ dịkwuo mma, ma na-egbo mkpa nke ndị mmadụ n'otu n'otu. Dị ka ụdị nke ọkpọkọ rọba siri dị, e nwere: eriri na-acha ọcha, eriri isi awọ, eriri uhie. acha anụnụ anụnụ, bibcock odo; A na-ekewa faucet plastik dị ka nha: 1/2 inch foset, 20mm faucet, 3/4 inch bibcock, 25mm bibcock, 16mm bibcock, 1 inch bibcock; A na-ekewa faucets plastik dị ka ọrụ ha si dị: kichin kichin ,Bathroom foset, ogbugba mmiri n'ubi, ugbo bibcock, ulo oru bibcock, ubi bibcock, tank bibcock, toliet bibcock, ịsa bibcock, elu mgbali bibcock, njikọ bibcock, transperent faucet.
Nke gara aga: Bibcock kwụ ọtọ (Rhombus Handle) X8211
Osote: Agba mmiri n'ubi Ugboro abụọ Union Ball Valve X9211-S agba odo
Igwe na-asa akwa plastik nwere njikọ ...